MIUI 12 မှာ Google Services သုံးရတာ အဆင်မပြေရင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ? — Anycall Mobile
MIUI 12 မှာ Google Services သုံးရတာ အဆင်မပြေရင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ?
By Naw Htoo Aung September 14, 2020 1 Min Read
Xiaomi, Redmi China Stable အလုံးတွေ MIUI 11 ဒါမှမဟုတ် MIUI 12 မြင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ Google Service တွေ သုံးမရတော့တဲ့ Error တွေရှိလာပါတယ်။ Google Application တွေ ဝင်တဲ့အခါမှာလည်း Couldn’t Sign in ဆိုပြီး ပြနေပါတယ်။
ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းကတော့ ကိုယ်မြှင့်လိုက်တဲ့ MIUI Version နဲ့ လက်ရှိကိုယ်သုံးနေတဲ့ Android Version က မကိုက်ညီလို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Google Play Service Error ဖြစ်ရင် တစ်ချို့ Google Play Service ပေါ်မူတည်တဲ့ Wave Pay တို့လို Mobile Banking Application တွေ၊ Ooredoo, MPT တို့လို Mobile Operator Application တွေ သုံးလို့မရတော့တာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပထမဆုံးနည်းကတော့ Setting >> Additional Setting >> Developer Option >> Turn on MIUI Optimization ကို ပိတ်ပေးရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိတ်ပြီးရင်တော့ ကိုယ်သုံးမရတဲ့ Google Services တွေက် ပြန်ပြီး စမ်းသုံးကြည့်လို့ ရပါတယ်။ သုံးကြည့်လို့ အဆင်ပြေသွားရင်တော့ Turn on MIUI Optimization ကို ပြန်ပြီး ဖွင့်ပေးလိုက်ပါ။
အပေါ်ကနည်းနဲ့ လုပ်ကြည့်လို့ အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့ ဒီနည်းလေးနဲ့ လုပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ပထမဆုံး GetApps ထဲ ဝင်မယ်။ ဒါပြီးရင်တော့ အပေါ်က Search Box ထဲမှာ google ဆိုပြီး ရိုက်ထည့်ပေးပါ။ အောက်ဆုံးထိရောက်သွားရင်တော့ အစိမ်းရောင် Sofware လေးကို Install လုပ်ပေးရပါမယ်။ Install လုပ်ဖို့ Get ကို နှိပ်ပေးပါ။
Open ကိုနှိပ်ပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ အပြာရောင် လေး နှိပ်ပေးရပါမယ်။ ဒီအဆင့်ရောက်သွားပြီ ဆိုရင်တော့ Permission ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ Permission ပေးဖို့ဆိုရင်တော့ Setting ထဲကနေ သွားလို့ရသလို ဒီ Security Application လေးထဲကနေလည်း Permission ပေးလို့ရပါတယ်။
ဒီ Manage Apps ထဲ ထပ်ဝင်ပေးရပါမယ်။ ဒီထဲရောက်ရင်တော့ ကိုယ် Permission ပေးချင်တဲ့ Google Service Software တွေကို Search Box မှာ ရိုက်ထည့်ပေးလို့ ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ Play Store လေးနဲ့ စမ်းပြပေးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာရောက်ရင်တော့ Permissions ထဲ ဝင်ပေးရပါမယ်။
ဒီထဲရောက်ရင်တော့ ကြက်ခြေပြထားတဲ့ အနီနေရာကို အမှန်ခြစ် အစိမ်းဖြစ်အောင် ပြောင်းပေးရပါမယ်။ ပြောင်းဖို့ဆိုရင်တော့ ဒီထဲက Always Allow ကို ရွေးပေးလိုက်ရင် ရပါပြီ။ ကျန်တာတွေကိုလည်း ဒီနည်းအတိုင်း လုပ်ပေးရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Google Service ErrorMIUI 12
Viber မှာ စာပို့ရင် ဘာကြောင့် “ချက်ချင်း” မထွက်တာလဲ?
Xiaomiဖုန်းတွေမှာ Zapya နဲ့ ကူးထားတဲ့ပုံတွေ Gallery ထဲ မရောက်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
iPhone မှာ ကိုယ်မသိတဲ့ Contacts တွေကို ဘယ်လို Blocked မလဲ?